E-Commerce | Digital Age
Knowledge Sharing Network
Secret of Digital Success
Blogger တိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အဆင့်မြင့် SEO နည်းဗျူဟာ (၁၂) ချက်
26 December 2018 - 0
Digital Marketing လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဘယ် Online Platform ကိုသုံးသုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ အရေးကြီးတာက SEO လို့ခေါ်တဲ့ Search Engine Optimization ပါ။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်အခု မိတ်ဆွေတို့ကို အသုံးဝင်နိုင်မယ့် SEO နည်းဗျူဟာ တချို့ ပြောပြချင်ပါတယ်။
Digital Marketing နှင့် အသေးစားလုပ်ငန်း
20 December 2018 - 0
Digital Marketing အားဖြင့် သင့်ရဲ့ ဖောက်သည်တွေနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ဆက်ဆံရေးတခုကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။ သင်ဟာ သူတို့အတွက် စီးပွားရေးတခုဆိုတာထက် ပိုလာပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Website ဘာလို့ နှေးကွေးနေလဲ...ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ (အချက် ၃ ချက်)
11 December 2018 - 0
Website သည် အပြင်အဆင် မည်မျှပင် ခမ်းနားသော်ငြား...နှေးကွေးတုံ့ဆိုင်းနေလျှင် Customer တို့အတွက် အနှောင့်အယှက်ကြီးစွာ ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးဆက်အနေနှင့် သင်၏ အမာခံဖောက်သည်တို့သည် နောက်တကြိမ် ဝယ်ယူမှုပြုရန် စိတ်ခုသွားနိုင်သည်။
Photoshop နှင့် Illustrator တို့၏ ကွဲလွဲခြားနားချက်များ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဒီနေ့ Adobe ရဲ့ ပေါ်ပြူလာအရမ်းဖြစ်ပြီး အသုံးလည်းတွင်ကျယ်တဲ့ Photoshop နဲ့ Illustrator နှစ်ခုရဲ့ တူမယောင်ယောင် ခြားနားချက် လေးတွေကို ပြောပေးချင်လို့ပါ။ ဒီနှစ်ခုက ဆင်တူသလို ဖြစ်နေတာကြောင့် လုပ်ငန်းစတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဟာက မိတ်ဆွေအတွက် ပိုပြီးသင့်တော်မလဲဆိုတာကို ဝေခွဲရခက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ရဲ့ မတူညီတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဆက်လက်ပြီး ရှင်းပြပေးပါမယ်။
Cyber Monday ဆိုသည်မှာ ...?
ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၆ရက်နေ့ကတော့ Cyber Monday ဖြစ်ပါတယ်။ Black Friday အားလပ်ရက်အပြီးမှာ ကျရောက်တဲ့ နောက်ထပ်ဈေးရောင်းပွဲတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။( Black Friday ဆိုသည်မှာ ? <= ဖတ်ရှုရန် နှိပ်ပါ။)
Black Friday ဆိုသည်မှာ ?
24 November 2018 - 0
Black Friday ဆိုတာ ဈေးရောင်းပွဲတစ်ခု....။ မတန်တရာ ပရိုမိုးရှင်းတွေပေးပြီး လက်ကျန်ဖြတ်တဲ့ ပွဲတော်တစ်ခု...။ Black Friday က နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပတ်ရဲ့ သောကြာနေ့မှာကျရောက်ပါတယ်။
Subscribe to E-Commerce
Travel Website ကို အရောင်းမြှင့်တင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း (၅)ချက်
Domain Name ရွေးချယ်ရာတွင် စဉ်းစားရမည့် အချက်(၁၀)ချက်
Apple ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Steve Jobs ရဲ့ ထူးထူးခြားခြား အမူအကျင့်များ
Digital Weekends for You
ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် TripAdvisor ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု
AI နည်းပညာရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယ့် အချက် (၆) ချက်
ဤဝဘ်ဆိုဒ်သည် Hap Eye Digital Marketing Agency မှ ဒီဂျစ်တယ်နှင့်ဆိုင်သော ပို့စ်များကို ရေးသားသည့် Website ဖြစ်ပြီး ဤဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိသော ပို့စ်များကို လွတ်လပ်စွာ မျှဝေပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ မျှဝေရာတွင် Hap Eye ကို Credit ပေးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ကူးယူခြင်းများအား ခွင့်မပြုပါ။
© Copyright 2018 by Hap Eye Digital Marketing Agency
SEO SEM E-Commerce Travel